4 ရထားဖြင့်ဥရောပမပေးတဲ့ခုနှစ်တွင် Underrated နေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားဟော်လန် >4ရထားဖြင့်ဥရောပမပေးတဲ့ခုနှစ်တွင် Underrated နေရာများ
သငျသညျမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးလေယာဉ်ပျံထက်ရထားလမ်းခရီးသွားစိတ်လှုပ်ရှား၏ပျော်ရွှင်မှုလက်ခံလို့ရထားလက်လှမ်းမှီဥရောပတိုက်တွင်သောအရပ်တို့ကိုရှာဖွေနေကြသူထွက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်စိတ်အားထက်သန်ခရီးသွားများအတွက်, ဤနေရာတွင်သင်ကိုချစ်မယ်ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းရဲ့. ဥရောပရထားခရီးစဉ်များကြီးမြို့ကြီးများ၏စိတ်နှလုံးထဲသို့နေ့စဉ်စီး, သငျသညျမှခွင့်ပြု ဥရောပရဲ့အံ့ဘွယ်သောအမှုကိုခံစားရ without breaking the bank while enjoying the unique experience ofatrain ride.
Here are some great ဥရောပတိုက်တွင်သောအရပ်တို့ကိုမ ရထားလက်လှမ်းမှီ:
ဤသည်ရထားစီးအကြောင်းကိုအဘို့ကြာရှည်ဦးမည်5နာရီနှင့်တစ်ဦးအပြန်လက်မှတ်ဘို့သင့်ကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်£ 168 ကုန်ကျ. သငျသညျပြင်သစ်သို့သွားရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ဒုတိယအတှေးအရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, သင်အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားကို drop သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီနေရာကိုင်. သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်ခွဲထားခဲ့သည်နှင့်ဤအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တိုင်းပြည်ဆီသို့ဦးခေါင်း Get. ပထမဦးစွာပယ်, ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေချစ်စရာကောင်းတဲ့များမှာ. ဒုတိယ, အစားအစာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့် ဝိုင် စျေးကြီးပေမယ့်တန်ဖိုးရှိ - သူတို့ကဆိုအရာအားလုံးဖြစ်ပါသည်. အောင်မြင်စွာ Gallic နှင့်ဂျာမန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလက်ထပ်သောတိုင်းပြည်ဝေးနေဖြင့်ဖြစ်ပါသည် အများဆုံးအံ့မခန်းအတွေ့အကြုံများကိုတဦး သင်တစ်ဦးတသက်တာမှာတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်. ရထားဖြင့်ဥရောပမပေးတဲ့အတွက်အပေါငျးတို့သနေရာများထဲက, Strasbourg သင်ဆွန်းရပါလိမ့်မယ်, သင်စူပါသိသိသာသာများ၏ရှေ့မှောက်၌ selfies ယူပြီးပါလိမ့်မယ် Strasbourg ဘုရားရှိခိုးကြောငျး.
Antwerp Strasbourg မှရထား
သငျသညျအကွောငျးကိုအဘို့ကိုဖတ်ချင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးစာအုပ်ဖမ်းပြီး 5.30 နာရီက Cologne ရရန်သင့်အားယူပါလိမ့်မယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. ဖြောင့်ကွယ်ပျောက်သင့်ရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဖို့: ဟုတ်ကဲ့, သငျသညျဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ရထားပြောင်းလဲနေတဲ့ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါပြန်လာလက်မှတ်£ 177 ကုန်ကျ, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိမယ့်. အဘယ်ကြောင့်? ဒီသောကွောငျ့, သံသယတစ်ခုမှမရှိဘဲ, ဂျာမနီအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမြို့; regally အဆိုပါရိုင်း၏ဘဏ်များပေါ်မှာထိုင်, Cologne တစ်ခုလုံးကိုတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးအံ့ဩဘွယ်သောအကြည့်. သင်တစ်ဦးအစားကောင်းကြိုက်သူများ Are? သငျသညျ Am Frankenturm ၏ရေနားဆွဲတလျှောက်ကစားသောက်ဆိုင်တွေမှာကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်! လည်း, ယင်းထုတ်စစ်ဆေး ပြတိုက် ထိပ်တန်းခေတ်သစ်အနုပညာမှာတစ်ချက်အဘို့အက Ludwig.
ရိုတာဒမ်ရထားလက်လှမ်းမှီဥရောပအကောင်းဆုံးနေရာများကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လေးနာရီအဘို့အစီးပါလိမ့်မယ်, နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ရထား၏အပြောင်းအလဲရှိသည်လိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏ပြန်လာလက်မှတ်ပေါ်တွင်£ 185 ကျော်ကိုမဖြုန်းသင့်တယ်. ရိုတာဒမ်ရှည်လျားရိန်းနှင့်ရေကြောင်းကွန်တိန်နာပေမယ့်ဘာမျှမနှင့်အတူ၎င်း၏ gritty ဆိပ်ကမ်းကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာဂုဏ်သတင်းကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာကျင်းပခဲ့ပါသည်. မကြာသေးမီက, ထိုသို့ဂုဏ်သတင်းကိုချွတ်လှုပ်ခြင်းနှင့်ခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးကိုလုံးဝအသစ်သောအလငျး၌မြင်ရဖို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်. ပတ်ပတ်လည်ဤအချိန်, သငျသညျက၎င်း၏အနုပညာရတနာသိုများအတွက်မြို့ကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်, the Museum Boijmans Van Beuningen which “which runs the gamut from Brueghel the Elder to Salvador Dali.” မြင်ကဒီမှာတွေ့ကြုံခံစားဖို့သိပ်ရှိတယ်, နှင့်တကယ်တော့ကြောင်း ရိုတာဒမ်ရထားလမ်းအားဖြင့်လက်လှမ်းမှီဖြစ်ပါသည် ပဲအခြားအပေါင်းဖြစ်ပါတယ်.
ဖြည့်စွက်ကာ, အဲဒီမှာလမ်းပေါ်တွင်သင်နာမည်ကြီးမြင်ရပါလိမ့်မည် Tulip လယ်ကွင်း, ဒီကျိန်းသေတဲ့အကြီးအ Vibe အတွက်မြို့ရန်သင့်ရလိမ့်မယ်.
အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးရွေး “ရထားဖြင့်ဥရောပမပေးတဲ့အတွက်သောနေရာများ” ဖြစ် – Antwerp (ဘယ်လ်ဂျီယံ)
ရရန်အမြန်ဆုံးလမ်း Antwerp ရထားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လေးနာရီခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ရထားပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သည့်တစ်ဦးအပြန်လက်မှတ်များအတွက်£ 87 ကျော်ပေးဆောင်မည်မဟုတ်. ယင်း၏လိုက်တယ်အနေအထားရှိနေသော်လည်း (မြို့သူမြို့သားဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်နယ်သာလန်တို့အကြားနယ်စပ်တလျှောက်တွင်ဖြစ်ပါသည်), Antwerp ဖြစ်ပါသည်, ထူးဆန်းအလုံအလောက်, ရထားစူပါသုံးစွဲနိုင်. သင်ပင် Eurostar မှတဆင့်အနေနဲ့ "မဆိုဘယ်လဂျီယံဘူတာ" လက်မှတ်မဝယ်နဲ့တိုင်းပြည်အတွင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုရနိုင်, Antwerp ပါဝင်သည် - ဘရပ်ဆဲလ်တစ်ဦးစီးနင်းကဲ့သို့တူညီသောစျေးနှုန်းမှာ. Antwerp လူအပေါင်းတို့သည်စိန်ချစ်သူများများအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖွစျလိမျ့မညျ: Antwerp, ဘယ်လ်ဂျီယံအရှိဆုံးခြွင်းချက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ရှိရာအချို့တို့သည်မြို့ဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ယူရသော၎င်း၏စိန်ခရိုင်အပေါ် prides, ချော, စိန် / ကျောက်မျက်၏ကုန်သွယ်ရေးအရပျကိုယူ.
Breda Antwerp မှရထား
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားကိုဆက်သွယ်ပါ ရထားလက်လှမ်းမှီဥရောပတိုက်တွင်သောအရပ်တို့ကိုမရန်သင့်မီးရထားခရီးစဉ်ကိုဘွတ်ကင်ဖို့နဲ့ကျနော်တို့မဆိုစျေးကြီးဘွတ်ကင်အခကြေးငွေသင်သက်သာရာပါလိမ့်မယ်, ရှုပ်ထွေးဘွတ်ကင်လုပျထုံးလုပျနညျး, နှင့်မဖြစ်နိုင်နှုန်းထားများ. ငါတို့သည်သင်တို့လမ်းတိုင်းခြေလှမ်းဖုံးလွှမ်းရရှိပါသည်. နှင့်, အရာအားလုံးခွဲထားခဲ့သည်ရဲ့တစ်ချိန်က – သင်သည်သင်၏ရထားစီးနှင့်ဦးတည်ရာကိုပျော်မွေ့သေချာအောင်, ဓါတ်ပုံအများကြီးယူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအရာအားလုံးသည် သွား. ပုံကိုသိပါစေ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-underrated-places-in-europe-reachable-by-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#rotterdam antwerp strasbourg ရထားအကြံပေးချက်များ travelcologne